ကျွန်မအလုပ်ရှုပ်နေတယ်…မောင်… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကျွန်မအလုပ်ရှုပ်နေတယ်…မောင်…
Posted by Wow on Feb 13, 2013 in Creative Writing | 64 comments
By Wow ကျွန်မအလုပ်ရှုပ်နေတယ်…မောင်…
ဒေါသပေါက်ကွဲနေသောမျက်နှာနှင့် တစ်ရုံးလုံးကြားလောက်သော အသံနှင့် အော်ဟစ်နေသော စီမံဌာနမန်နေဂျာ…
‘ဒီခရီးထွက်ရမယ်လို့ ကြိုပြီးလဲ ရီပို့တင်မထားဘူး။ အခုတက်လာတဲ့ အသုံးစရိတ်တွေကို ကျွန်တော် ဘယ်လိုအကြောင်းပြချက်နဲ့ ထုတ်ပေးရမှာလဲ..’
‘ဒါ Head Office က special request ပါ……
‘ခင်ဗျားတို့ လုပ်ချင်ရာလုပ်လာခဲ့ပြီးမှ ဒါပဲဆိုပြီးလာချပြတာမျိုး လုံးဝလာမလုပ်နဲ့… ဒါကျွန်တော့်ဘောင်ထဲမှာ…’
မျက်နှာကြီးမဲပြီး ပေါက်ကွဲနေသော စီမံမန်နေဂျာကို ကြည့်ပြီး.. စိတ်မထိမ်းနိုင်လိုက်တာဟု…
‘Calm down.. calm down…’
အခန်းထဲဝင်လာသော မြန်မာရုံး ဌာနေကိုယ်စားလှယ်…
‘You know what… ဒီ နိုင်ငံခြားရုံးချုပ်က special request, special project တွေ ချက်ချင်းလုပ်ဆို ငါ စီမံနဲ့ အမြဲ ထိပ်တိုက်တွေ့ပြီလေ…’
မခံမရပ်နိုင်အကြီးအကျယ် ပေါက်ကွဲထားသော ခံစားချက်နှင့် မဲနေသော မျက်နှာကို ကြိုးစားပြင်နေရသော စီမံမန်နေဂျာကို ကြည့်ပြီး.. ဖစ်မှ ဖစ်ရလေ.. ဒီလောက် စိတ်လှုပ်ရှားလွယ်ရလား…
‘အိုး.. ဒီကိစ္စ ငါရှင်းပြနိုင်တယ်ထင်ပါတယ်…..
အင်း ပြသနာတစ်ခုရှင်းသွားပြီပေါ့…. ကိုယ်ဆက်ရှင်းပြစရာမလိုတော့…
ညနေရုံးဆင်းခါနီး ပစ္စည်းတွေသိမ်းနေစဉ်… မြန်မာရုံးအကြီးအကဲ ကိုယ့်စားပွဲနားရောက်လာသည်။
‘မင်းသိလား ဒီလိုကိစ္စမျိုးကိုနောင်ဆို အရေးကြီးလုပ်ငန်းစဉ်အနေနဲ့ စီမံကလက်ခံရလိမ့်မယ်’
အထွေအထူးပြောစရာမရှိ… ပင်ပင်ပန်းပန်း အရေးပေါ်လုပ်လဲပေးရသေး မုန့်မရ ဒုတ်ရသလို မဖြစ်တော့ရင် တော်ပြီပေါ့….
‘Anyway… congratulation ပါ.. မင်းက မင်းခံစားမှုကိုတော်တော်ထိမ်းချုပ်နိုင်တာပဲ၊ ဒီလောက်ပေါက်ကွဲနေတဲ့သူကို အေးအေးဆေးဆေးရှင်းပြနိုင်တာ… မင်းပြုံးတောင်ပြုံးနိုင်သေးတယ်…’
‘ခံစားမှုကို ထိမ်းချုပ်ထားတာ ငါအကျင့်ဖြစ်နေပါပြီ….’
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က အကြံပေးဖူးသည်.. သူအနားမှာရှိရှိ မရှိရှိ နင့်ရင်ထဲမှာ သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြဲ safety ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရရင် နင်အဲဒီ့သူနားက မခွာနဲ့တော့တဲ့…
မောင်ကတော့ သူမရဲ့အမြဲတမ်း လုံခြုံနွေးထွေးစေတဲ့ safety belt လေးပါပဲ…
တစ်မြို့ထဲဆိုရင် သံလိုက်လေးလို သူမနားအချိန်မှန်ကပ်လာတတ်သလို… အဝေးရောက်နေလျှင်လည်း တစ်နေ့ အနဲဆုံးတစ်ခေါက်တော့ဖုန်းခေါ်တတ်တာပါ…
အလုပ်ရှုပ်ရတဲ့ကြားထဲ… ဖုန်းကလာပြန်ပြီ.. ညိုညင်သလို အမြဲညီးတတ်ပေမဲ့ ကျေနပ်နှစ်သိမ့်နေတတ်တာပါ…
Hello, hello, baby, You called I can’t hearathing
Wha- Wha- What did you say?
Oh, you’re breaking up on me…
ဖုန်း rign tone သံမည်လာပြီး ကြည့်လိုက်တော့ မောင့်ထံမှ…
‘မောင်ဒီနေ့ အစည်းအဝေး ရှိတယ် မေ.. မောင့်ကို တစ်ခုကူညီပါဦး… ရုံးမှာ……. ‘
အလုပ်ကိစ္စပြောစရာရှိတာတွေပြောပြီး သူမရဲ့မောင် ဖုန်းချသွားတော့မှ… မောင်ဒီနေ့တော့သူမဆီ လာမတွေ့တော့ဘူးပေါ့… အင်းလေ အစည်းအဝေး ရှိတယ်ဆိုတော့ အလုပ်ကိစ္စပဲ သူမနားလည်ပေးရမှာပေါ့…
ပြုံးပြီး အလုပ်ဆက်လုပ်ရန်ပြင်လိုက်သည်။ ရင်ထဲမှာတော့ သက်ပြင်းတစ်ချက်ခိုးချလိုက်ပြီး ခါတိုင်း မောင့် အစည်းအဝေး တွေဆို သူမအမြဲ အသေးစိတ်သိနေကြပါ။ မသိခဲ့ရင်တောင် မောင်က သူမကို ရောက်ရောက်ခြင်း သူမ နားထောင်ချင်ချင် နားမထောင်ချင်ချင် အသေးစိတ်ပြောပြနေကြပါ…..
စိတ်ထဲထင့်သွားပြီးမှ… အင်းလေ… တစ်ခါတစ်လေလဲ ဘယ်ပြောပြချင်ပါ့မလဲ….
‘အမ ဘယ်လိုလဲ သံလိုက်တုံးကြီးပြန်ရောက်ပြီပေါ့… မသွားသေးဘူးလား’
‘ဒီနေ့ အစည်းအဝေး ရှိတယ်ဟ.. မသွားသေးပါဘူး’
ရုံးက လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက် ဂျူနီယာကလေးအမေးကို ပြန်ဖြေရင်း ပြုံးပြလိုက်တော့…. ခါတိုင်းလို ကိုယ့်အပြုံးကို ကိုယ် ယုံကြည်မှုမရှိချင်……
အိမ်အပြန်လမ်းမှာတော့… ကားထဲမှာ နော်နော်သီချင်းလေးနဲ့အတူ…
ဒီလိုညတိုင်း….. ကိုယ်နဲ့မင်း အတူဆုံတွေ့ဖြစ်ရင်… အတိုင်းထက်အလွန်ပဲ…….
They’re gonna play
And I cannot text you withadrink in my hand, eh….
You shoulda make some plans with me,
‘မေ..ဒီနေ့ မောင်တို့ ပရောဂျက်အပြီးသတ်ရမယ်.. မောင် ဒီဖိုင်တွေလိုတယ်… မောင် အစည်းအဝေးထဲ ခဏနေရင်ရောက်နေမှာ … မေ ..ဖိုင်တွေယူလာပြီး အပြင်ကစားပွဲမှာ ထားခဲ့ပေးပါလား…’
မောင် ..အလုပ်ကိစ္စပြောနေတာလေ သူမ professional ဆန်ရမည်။
ဒါပေမဲ့ ဒီနေ့ကော မောင့် ရှက်ဂျူးမှာ သူမ မပါတော့ဘူးလား….
ခါတိုင်းတော့ သူမမေးစရာမလိုအောင် မောင့် ပလန်တွေမှာ သူမက အမြဲတစ်နေရာမှာရှိနေပြီးသားပါ။ ဘယ်လောက်အလုပ်များများပေါ့….
ဒီနေ့နဲ့ပါဆို မောင်ပြန်ရောက်တာ နှစ်ရက်ရှိပြီလေ….
‘နက်ဖန်မနက်အစောကြီး နေပြည်တော်သွားရမှာ… မေ…. နေ့ချင်းပြန်ပဲ လေယာဉ်လက်မှတ်ယူပြီးပြီ။ ပြန်လာရင် …. မြို့ကိုဆက်သွားရမယ်…’
ဆိုတော့ ပြီးပြီလေ… ဒီတစ်ပတ် သူမနဲ့မောင် တွေ့ဖို့ရာ မရှိတော့ဘူးပေါ့….
ဒါ… အလုပ်ပဲ မေ…
ဦးနှောက်က နာကျင်နေတဲ့ ရင်ဘတ် ဘယ်ဘက်ခြမ်းလေးကို အကြိမ်ကြိမ် ကြိုးစားသတင်းပို့သည်….
အိုကေလေ… မေ.. ဒီလောက် မပျော့ညံ့ပါဘူး…
I don’t wanna think anyone
I left my hand and my heart on dance floor
I don’t wanna talk anyone
Eh, eh, eh, eh, eh, eh…
နားကြပ်တပ်ပြီး ရုံးခန်းထဲမှလူများနှင့် ခဏအဆက်အသွယ် ဖြတ်လိုက်သည်…
ဒီနေ့ Project Plan တစ်ခု အပြီးဆွဲရမယ်…
Boy, the way you blowin’ up my phone
Put my coat on faster, leave my girl no faster.
I shoulda left my phone at home, ’cause this isadisaster!
Callin’ likeacollector- sorry, I cannot answer!
Rign tone သံကြောင့် သူမဖုန်းကိုင်လိုက်သည်…
‘မောင် ၃ နာရီလောက် ရုံးရောက်မယ်မေ.. လိုအပ်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေယူပြီး ညနေ ငါးနာရီ ခရီးပြန်ထွက်ရမယ်.. မေ .. မောင့်ကို ရုံးမှာစောင့်နေနော်…’
ဘုရားရေ… finally… မောင်သူမဆီလာပြီပေါ့…
ဒါပေမဲ့ တစ်ဆိတ်ကွယ် လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေယူဖို့ ရုံးလာမှာတဲ့…
သူမအတွက် သီးသန့် အချိန်ပေးတာ မဟုတ်ဘူးပေါ့… သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ပြောဖူးတဲ့ feel safety ဆိုတာကို အူကြောင်ကြောင် ပြန်တွေးမိသည်။
အိုကွယ် … ဒီလောက် risk တွေနဲ့ ကစားနေတဲ့ ခေတ်ကြီးထဲမှာ နေရာတကာမှာ safety first မလိုပါဘူး…
ရီးစားနဲ့ တစ်ခါမှချိန်းမတွေ့ဘူးတဲ့ အပျိုပေါက်လေးလို မောင် လာမဲ့ အချိန်ကို မျှော်မှန်းရင်ခုန်ရင်း သက်ပြင်း ခပ်ကြီးကြီးများကတော့ မကြာခဏချမိသည်….
နေပြည်တော် လေယာဉ်ချိန်စောပြီး မောင် နှစ်နာရီခွဲလောက်ပဲ ရုံးရောက်လာသည်…
မောင် ရောက်လာတော့ လိုအပ်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းများနဲ့အတူ Project ကိစ္စ ဆွေးနွေးစရာများ ဆွေးနွေးရင်း မောင့်ကို ခိုးခိုးကြည့်ရသည်။ ရုံးမှာဆိုရင် သူမတို့စုံတွဲက တည်ငြိမ်၊ သေချာမှုရဲ့ စံပြလေ။ ခံစားချက်တွေ ဖလန်းထပြနေစရာမလိုပါ…
ဒါပေမဲ့.. မောင်ရယ်.. မောင်က ကျွန်မလူလေ…
တဆိတ်လေး… အလုပ်ကိစ္စရပ်ပြီး.. ပါစင်နယ်လေးနဲနဲပြောရအောင်လား..
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုခုပေါ့… တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် မောင် ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ မြန်မာအင်္ကျီ ၀မ်းဆက်လေး ဒီနေ့ကျွန်မ ၀တ်လာတယ်လေ…
သတိထားမိပြီး… လှတယ်.. ဆိုတာလေးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့…
‘ မေ.. တို့ ဌာနဘက်က ဒီကိစ္စတွေ အမြန်ဆုံးစရလိမ့်မယ်.. မောင့် Project က နှောင့်နှေးလို့မရဘူး…’
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်.. မောင် က မေ့.. ရီးစားလေ.. မေ နဲနဲတော့ ပေါက်ကွဲလို့ရတယ် မဟုတ်လား…
ဒါပေမဲ့.. ရုံးကလူတွေရှေ့မှာ ရန်ဖြစ်ပြရမှာလား… ရှက်စရာကြီး…
ဦးနှောက်ထဲ အပြန်အလှန်စဉ်းစားရင်း မေ့မျက်နှာ တဖြည်းဖြည်း နီရဲလာသည်…
‘ဒါပေမဲ့ မောင် တို့ ဘက်က ရီပို့တွေ တက်မလာခင် မေ ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးလေ… ကိုယ့်တာဝန် အရင်ပြီးအောင် လုပ်ပြီးမှ မေ့ကို ပြောဖို့ကောင်းတယ်…’
တကယ်လက်တွေ့မှာတော့ မေ.. မောင်တို့ ဌာနဘက်က လိုအပ်ချက်တွေကို ထောက်ပြနေမိတာပါပဲ…
မျက်နှာတွေ နီရဲလျှက် တစ်ခုခြင်းထောက်ပြနေသော မေ့ကို ကြည့်ပြီး မောင် နဲနဲတော့ အံ့သြသွားပုံရသည်။
‘မေ… မောင့်ကို စိတ်ဆိုးနေတာလား..’
အမလေး… ပထမဆုံးမောင်ပြောတဲ့ အနဲငယ် ပါစင်နယ်ဆန်တဲ့စကားပါပဲ…
ထွက်ခွာသွားချင်နေတဲ့ စိတ်တစ်ခုကို ဘယ်လိုကြိုးတွေနဲ့မှ ချည်နှောင်လို့မရဘူး ဆိုတာ.. မေ.. ကောင်းကောင်း နားလည်ထားတယ်မောင်ရဲ့…
ဒီ့အတွက်လဲ မေ့ ဘက်က အသိအမှတ်ပြုခံစားချက်တစ်ခုကို မောင် ရလိမ့်မယ်လို့ မမျှော်လင့်နဲ့…
‘ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ကွယ်’ …လို့ပဲ အိမ်က ကြောင်မကြီး ခလေးမွေးတဲ့သတင်းလို ဘက်လိုက်မှုကင်းကင်းနဲ့ အားလုံးကို ပြောပြဖြစ်မှာ….
အနဲငယ် တင်းမာသော မျက်နှာကိုယ်စီနဲ့….
ကျွန်မ ဘယ်တော့မှ ထပ်မစဉ်းစားတော့မဲ့ အကြောင်းအရာတွေထဲမှာ မောင် ဘယ်တော့ထပ် ဖုန်းဆက်မလဲဆိုတာ ထိပ်ဆုံးကပဲ မောင်ရဲ့….
တည်ငြိမ်သောမျက်နှာနဲ့ စားပွဲမှာ ပြန်ထိုင်လိုက်ပြီး…. အနီးဆုံးစားပွဲက လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်ကို ချိုသာစွာ ပြုံးပြလိုက်သည်….
‘အမတို့ …. Project ရဲ့ deadline က ဘယ်တော့လဲဟင်….’
And I’m sick and tired of my phone r-ringing.
Sometime I feel like
Tonight I’m not takin’ no calls, ’cause I’ll be dancin!
‘Cause I’ll be dancin’
Weekend မှာ အိပ်ယာ အနဲငယ်နောက်ကျ နိုးဖြစ်ပြီး…
နိုးနိုးခြင်း အိပ်ယာမထချင်သေးတော့ ရေတစ်ခွက်ထသောက်ပြီး စားပွဲပေါ်မှ ကြုံရာစာအုပ်တစ်အုပ်ကိုဆွဲပြီး.. အိမ်ယာပေါ်ပြန်လှဲလိုက်သည်….
အရေးအသားနုလွန်းသော စာအုပ်တွေကို သူမ မကြိုက်တတ်သလို မလိုအပ်ပဲ သဘောကောင်းပြလွန်းနေသော ဇတ်ရုပ်တွေကိုလဲ မနှစ်သက်… ဒါပေမဲ့ အခက်အခဲကြားမှ ဖြစ်တည်လာရသော စာအုပ်တစ်အုပ်ကို သူမတန်ဖိုးထားဖတ်ရှုသင့်သည်ပဲ….
‘မထ’ တမ်း ဖတ်ရလောက်အောင်တော့ သူမကို မစွဲဆောင်နိုင်… ဒါပေမဲ့ မျက်စိညောင်းပြီး ပြန်အိပ်ချင်လာအောင်တော့ ကိုမြအေး သူမကို ကူညီနိုင်မှာပါ….
ဆရာဝန်တစ်ယောက်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ခံစားချက်ကြောင့် မသေသင့်ဘဲသေသွားရသော လူနာနှင့် သူ့မိသားစု…..
သူမ ၀မ်းနဲပြီး မျက်ရည်ဝဲကာ ရင်ထဲလှိုက်တက်လာသည်…
မောင်… ဘာတွေလုပ်နေလဲ… (ဟင်…ဘာမှလဲ မဆိုင်ဘူးနော်…)
မောင်… မောင်… မောင်…. ခေါင်းအုံးပေါ်မျက်နှာအပ်ပြီး ရှိုက်ကြီးတငင်ငိုလိုက်သည်….
အလုံပိတ်ထားတဲ့ အခန်းထဲမှာ ကျွန်မငိုတာ ဘယ်သူမှ မကြားဘူးလေ…..
We’re sorry….the number you have reached is not in service at this time.
Please check the number or try your call again.
Lady Wow Wow ရဲ့ ဒီ အရေးအသားကို ကြိုက်လွန်းလို့ဖြစ်သွားတာတာ။
ရန်ကုန်လာမှ ရိုက်မည်။ (ဓာက်ပုံ)
ကျွန်မ အရှုပ်လုပ်နေသည် ကိုကို။
စကားမစပ် အဲ့ဒီ သီချင်းကိုတော့ ကျုပ်မကြိုက်ဘူး။ …
နှလုံးသား ခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ ကိုယ့်ကို ပြောထားတဲ့ ဆုံးမ စကား တစ်ခု ပြန်ပြောပြမယ်။
ခုတော့ ရီ နိုင်အောင်ပဲ ရီ လိုက်ပါအေ။
Ghi Ghi ThE KiD says:
ခေါင်းစဉ် နာမည် အရမ်းမိုက်တယ်.. အရမ်း ခိုက်သွားပြီ။
အရမ်းခိုက်အောင် ရေးရသူရဲ့ ရင်ကိုလဲ တစ်ချက်ကျိပါအုံးကွယ် :harr:
ဟင်းနော်… အမည်မဖေါ်လိုသူ မည်သူမှဆိုပြီး… နာမယ်ရင်းဖေါ်လိုက်မှာ
ခံစားချက်တွေချင်း တိုက်ဆိုင်သွားပြီ ” ကျွန်မ ငိုနေတယ်မောင် ”
နိုပါနဲ့ဗုံလေးရယ်… ဘယ်သူကတီးသွားလို့ နိုနေတာလဲ
ဂေဇက်က ဦးကြောင်ကြီး နဲ့ များ ဆိုင်နေမလားလို့ 
အိမ်က ငါးခြောက်ပြားတွေပျောက်ပြီး နောက်တစ်နေ့ ကြောင်မကြီး သားရှိတာဆိုတော့…
မိုက်တယ် … ကြိုက်တယ် …
ခံစားချက်ခြင်း အနဲငယ်တိုက်ဆိုင်နေတာနဲ့ … ငိုချင်လာပြီနော် …
အိမ်း.. တဂါမကြီး ဝေ…
တရားသဘောနဲ့ ဆိုရင် ဒါမျိုး သက်ကာရဒိဌိ ဆိုလား…. ဟီး သေချာသိတာတော့ ဟုတ်ဝူးရယ်
နည်းနည်းလည်း တိုက်ဆိုင်သလိုလို ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ ပြောတာပါ ….
အခုတော့ အရှုပ်တွေ ပြေးလုပ်လိုက်ဦးမယ်ချင့် …
“ဟဲ့.. ငါအလုပ်ရှုပ်နေတယ် ကောင်စုတ်ရဲ့..”
ဘယ်လိုပြောရမလဲတော့ မသိဘူး …..အင်းးး
ဇတ်ကောင်တွေရဲ့ အတွင်းအဇ္ဈတ္တသဏ္ဌန်ကို ဆွဲထုတ်ပြနိုင်တယ်ဆိုရမလားပဲ
ယောက်ကျား မိန်းမ မတူညီတဲ့  စိတ်နေသဘောထား အခြေအနေကိုပေါ်လွင်စေတယ်
အလုပ်ပေါ်သိပ်အာရုံစိုက်တတ်တဲ့  ယောက်ကျားတွေရဲ့  လစ်ဟာမှုနဲ့ 
ခံစားမှုနဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကို မေ့ ပျောက်ထားနိုင်စွမ်းပေါ့ 
ဆန့် ကျင်ဘက်အားဖြင့်ဘယ်လောက်ပရိုဆန်သည်ဖြစ်စေ ကိုယ့် ကို
ဂရုစိုက်စေချင်တဲ့  မ်ိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့  အတ္တသဘောလေးကို
မှုန်ဝါးဝါးလေးပြသွားနိုင်တာပဲ ။ ဒီဇတ်လမ်းကိုဆက်ရေးမယ်ဆိုရင်ဖြင့် 
အက်ကြောင်းရဲ့ နိဒန်း လို့ အမည်ပေးလိုက်ချင်ရဲ့ 
ဟုတ်ပါတယ် ….တစ်ကယ်သာအိမ်ထောင်ပြုရင် သိပ်ချစ်ပါရဲ့ နဲ့ 
ကွက်လပ်တစ်ခု ဖြည့် စရာလိုနေ သလိုပါပဲ ။
တစ်ချို့ ယောက်ကျားတွေက အချစ်ကို ဂရုစိုက်မှုနဲ့ မပြတတ်ဘူး ။
တစ်ချို့ မိန်မတွေကျတော့အချစ်ကို ဟန်ဆောင်မှုနဲ့ ပြတတ်တယ် ။
ကဲ ကဲ ထင်ရာတွေပွားနေမိတာ ဆောရီးနော ….
ကျုပ်သဘောပြောရင် ဒီလိုထူးခြားတဲ့  ရေးဖွဲ့ မှုနဲ့  ဆန်းသစ်တဲ့  အကြောင်းအရာကို
ကြိုက်ပါတယ် ။ အမှတ်ပေးခွင့် ရ ရင် အမှတ်ပေးမိမှာပါ ။
တစ်ခုဘောမပေါက်တာက ….. ဒီလိုရေးနိုင်ပါလျက် ဘာလို့ များ
နဲနဲလေးပဲရေးတာလဲ လို့ ….
အူးဆာရဲ့ ပွားချက်က ဟတ်ထိလွန်းလို့ …ဂိန် လို့တောင် မအော်နိုင်ပါဝူး အူးဆာရယ်… :harr:
နဲနဲလေးပဲရေးရတဲ့ အကြောင်းရင်းက အဆုံးသတ်မသေချာတဲ့ မြန်မာဘောလုံးအသင်းလို.. ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုမ၇ှိ သေးလို့ပါလို့ ရှက်ရှက်နဲ့ ၀န်ခံဘာရဇေ…
အမှတ်ပေးခွင့်လိုချင်ရင် ဘယ်သူ့ကိုမဆိုပေးနိုင်ပါတယ် ကဆာမိ၊
မ မအားဘူး၊မောင် မအားဘူး ပြောနေစရာမလိုပါဘူးနော။
ဟုတ်ကဲ့  အစ်မရေ
တစ်ခုသောအချိန် …………. မှာ ….
:hee: :hee: :hee:
ဘာ.. ဘာဆို ဘာမှ မပြောပါရစေနဲ့…
ကြောင်မကြီးသားပေါက်တာ ကျုပ်အိပ်ရာအောက်မှာ ပေါက်စရာလား…
ဟီ ဟိ.. ပွါးကြည့်တာ..
အင်းလေ.. အူးကျောက်က ပန်းနာပါဆိုမှ ….
မောင်… အများပေါတော့ေ….ာခွဲထားတယ်ဆို…
တောက်စ်… ဘယ်လိုမှ ဇတ်နာမရတဲ့ ငါ…
မေ မောင်လည်းအလုပ်ရှုပ်နေလို့ အခုမှဝင်ဖတ်ပြီးမန့်ဖြစ်တော့တယ်။
အော်…ခွဲထားတာလား…သိပါဘူး ဟိုတစ်လောက ဖွဘုတ်မှာ ဗမာ၃ယောက် ယိုးဒယားမှာ သွားပြောင်းကြတယ်ဖတ်လိုက်ရလို့…ပါများသွားဘီလားလို့ဗျာ… :harr:
WOW..ခင်ဗျား..တူမကြီးကို အမျိုးသားအောက်မေ့၍ အပေါ်ကကဲ့သို့ မန့်မိပါသည်.. အမျိုးသမီးဖြစ်နေပါက
Take it easy! It dosen’t matter! :hee:
Anyway, apology accepted! (credit to ဒဂျီး)
အရီး လဲ အလုပ်ရှုပ်နေတယ်…. မေ…
ဟင့်အင်း.. ရ၀ူး.. အလုပ်ရှုပ်လဲ ဂရုစိုက်ရမှာပဲ :harr:
ကျုပ်ရဲ့ Drinking Project Deadline က ဘယ်တော့မှန်းကို မသိတာ
မသိတာဘဲ ကောင်းပါတယ် …
We’re sorry….the glass you have reached is not in limit at this time.
Please check the bottle or try you drink again.
ကိုယ်…….. အရက်မူးနေတယ် ……. ချစ်
မောင့်ကိုစိတ်ဆိုးနေတုံး ကြောင့်ကို ထိပ်ထိုးပစ်မှာနော်…
အော် ဂလောက်တောင် ထိန်းချုပ်နိုင်တယ်လား ….
ချီးကျူုးပါတယ် မမဝေါင်း :hee:
သများသာဆိုရင်တော့ ငယ်ထိပ်ကို ခုံဖိနပ်နဲ့
*ကတောက်စ် အလိုက်ကမ်းဆိုးမသိရန်ကော* :harr:
ဒီမှာ မကြည်ဗျာ.. အခြစ်ဆိုတာ… ဆောင့်ဆီးနိုင်မှု ထိမ်းသိမ်းနိုင်မှုတွေနဲ့အတူ… မောင်မလာ မောင်သာငတ် ဆိုလား ….
ဂယ့်အဖြစ်မှန်က ကိုယ်ပဲခံရတာ.. ဂဏန်းညှပ်တာလူမမြင်ဝူး မယ်ဝေါင်း ထအော်တော့ လူကြားဒယ် ဆိုတာမျိုးပါကွယ်
တစုံတရာကြီးကြောင့် တစုံတယောက်ကို တကြီမ်တခါမက သည်းခံနိုင်ကြတာပေါ့ကွယ်
အများရှေ့မှာဟန်ဆောင်ကောင်းတဲ့နေရာမှာ ရွှေကြည်လည်းတော်တယ် ကြွားတာ
အိုက် တစုံတစ်ရာဂျီးကို တစ်စုံ.. တစ်ရာနဲ့ ရောင်းထုတ်လိုက်ရင် ကောင်းဝူးလား ရွေကြည်…
ရဲရင့်သော၊ ပြတ်သားသော၊ ဆန်းပြားသော …….
အရေးကောင်းလက်တစ်လက်ကို တွေ့ရှိလိုက်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ :hee:
ဟီးးးးးး…. မွမွ… ဂယ်လား.. ဒီက သိပ်မြှောက်ပေးလို့ရတာဟုတ်ဝူး…
မိန်းကလေးတွေက သိပ်ခံစားတတ်ကြတာပဲနော် ။
တကယ်ဆိုရင်တော့ အပြစ်ပြောစရာ မရှိ ၊ ကောင်းပါတယ်လေ ။
အဘက တစ်ခါတစ်လေ မိန်းကလေးတွေ သိပ်ခံစားကြလွန်းလို့ ၊
သူတို့ ဟန်ဆောင်နေကြတာလားတောင်ထင်မိတယ် ။
အဘ တို့လို ယောက်ျားလေး တွေ များကျတော့ ၊
အခုနေ မိဘ ဒါမှမဟုတ် ဇနီး သေရင်တောင် ၊
တော်တော် ဒုက္ခ ရောက်အုံးမှာ ၊
ဘာလို့လဲဆို ၊ မျက်ရည် မကျလောက်ဘူး ထင်တယ် ။
ပြောပြလိုက်ပါမမရယ်… တဂယ် ရင်ဆိုင်တွေ့ရင်.. ဖင်ထိုင်မေ့တတ်တယ် ဆိုတာ…
ဟန်ဆောင်တာ မဟုတ်လောက်ဘူး အဘရဲ့…
ကိုယ့်ကို ကိုယ်တောင် သူများထက်စာရင် နဲနဲတော်သေးလားလို့ :harr:
ဘယ်လောက် အလုပ်များများ တစ်ချိန်လောက်တော့ ပေးရမယ်လေ
ီသိကြားမင်း လွှတ်တော်တက်နေတယ် နတ်သမီးတို့ရယ် :harr:
သကြားတော့ နတ်သမီးတွေ ချစ်ဒေါသကြောင့် တစ်စစီ ဖြစ်တော့မယ်..
တော်လိုက်တာကွယ်.. ဒါဘဲ.. personal & professional (ခွက်ဒစ်တူ ကိုရီးဖတ်.)
လုံမကတော့ မကြုံဖူးပေမယ်.. ကိုယ်သာဆိုရင်ဆိုပြီး တွေးကြည့်လိုက်တော့.. စိတ်ကောက်ပစ်လိုက်မှာ.. ဘယ်လောက်ပဲမအားမအား..ညဘက်တော့ ဖုန်းလေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် စကားလေးဘာလေးပြောပါလားနော်…
လုံမခံယူချက်ကတော့ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူအတွက်ဆိုရင် အချိန်ဆိုတာ ရအောင်ရှာလို့ရပါတယ်.. အရမ်းသတိရလာရင် ချက်ချင်းဖုန်းခေါ်ပြီး သတိရလို့ပါ၊ နေကောင်းလားဆိုတာလေးကို ရအောင်မေးပါတယ်… ဘ၀ဆိုတာ တိုပါတယ်.. ချစ်တဲ့သူအတွက် တစ်စက္ကန့်လောက်ဖြစ်ဖြစ် အချိန်ပေးဖို့ကြိုးစားကြရင် ကောင်းမှာပဲ..
အရေးအသားအတွက် bravo ပါနော်.. လုံမက အဲ့လိုမျိုးတွေ အရမ်းကြိုက်တာ..
ဖတ်ရှုခံစားနားလည်ပေးသောမွန်မွန်အား ကျေးဇူးအကြီးကြီး… :hee:
ဒါ့ပုံဆြာလို့ မပြောရ၀ူး… :harr:
မအားဘူး ထင်ပါရဲ့ ….
ကျနော် ဖိတ်စာ လိုက်ဝေတာပါ ခင်ဗျာ …
” မန်းဂဇက်ချစ်သူများစာပေဆု နှင့် ရွာ့ဘုရားပွဲ “ အတွက်ပါ ခင်ဗျ ..
အမ ရောက်ပြီးပြီလားတော့ မသိဘူးရယ် …
မရောက်သေးရင်လည်း လာခဲ့ပါဦးလို့ …….။
ဒု – အတွင်းရေးမှူး
Thu Thu Htet says:
ခေါင်းစဉ်ရွေးတာ တအားတော်တယ် … ခေါင်းစဉ်ဖတ်လိုက်တာနဲ့တင် ဝင်ကြည့်ဖြစ်ဖို့ ၁၀၀%ပဲ။
ဒါပေမယ့် ဘယ်ဟာကအတွေး၊ ဘယ်ဟာကတစ်ကယ်ပြောနေတာဆိုတာတော့ တစ်ချို့နေရာတွေမှာ သေချာမသိဘူးရယ်…
ဥပမာ – “no way” ဆိုတာ စိတ်ထဲပြောတာလား အပြင်မှာပြောလိုက်တာလားမသိဘူးဖြစ်နေတယ်
တောက်လျှောက်သဘောကျလာပေမယ့် ဇာတ်သိမ်းကတော့ အီလည်လည်ကြီးဖြစ်နေသလိုပဲ
ဖတ်ရှုသွားတာ ကျေးဇူးပါ ရွာသူအသစ်လေးရယ် :hee:
မှောင်လည်း ကျမကို ရွာထိပ်က ကုက္ကိုလ်ပင်အောက်မှာ ထိုင်ဆောင့်ရင်း
ပုံ ကျမရဲ့ မှောင်
စန်းထနေသလား ဒါမှမဟုတ် ဘာရွှင်နေလဲဟင်င်င်…
မနေ့က မှ Service Launch တစ်ခုပီးသွားဒယ်အေရယ်..
နက်ဖန်ရောက်မယ် မုန့်လိုက်ကျွေးဘာာာာာ နော်…